Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Koonfur Afrika oo isu diyaarinaysa Banaabaxa lagu horqabanayo baarlamaanka Pan African
Jaaliyadda Koonfur Afrika oo isu diyaarinaysa Banaabaxa lagu horqabanayo baarlamaanka Pan African
Jaaliyadda Ogadeniya ee Dalka Koonfur Africa ayaa banaanbax ay si weyn u soo qaban qaabisay ku qabanaysa Pan African Parliament Gallapher Estate Midrand Johannesburg hortiisa halkaas oo ay isugu imanayaan baarlamaanka Africa madaxda Dalalka Africa Iyo Hay’ado Caalamiya Shirka ay isugu imanayaan baarlamanka Africa ayaa noqonaya xuska aas-aaska sanad-guuradii 10aad ee ka soo wareegtay baarlamaanka Africa .
Banaanbaxa ayay Jaaliyadu ku dhawaaqday isla markaana iclaamkiisa gaadhsiisay warbaahinta Dalka Koonfur Africa Sida Tv-yada, idaacadaha Localka ah, Qareeno u dooda Xuquuda aadanaha Iyo Hay’ado Caalamiya. Gudiga qabanqaabada banaanbaxa ayaa diyaariyay war-Saxaafadeed ay u gudbiyeen wargaysyada.
Banaanbaxa ayaa lagaga soo horjeedaa Xasuuqa Qarsoon ee ka dhan ka ah xuquuda aadanaha ee ay xukuumada Gumaysiga Itoobiya ka gaysato dhulka Somalida Ogadeniya Iyo in la tuso baarlamaan ka Africa Xadgudubka Iyo Gumaysiga xukuumada Itoobiya ay ku hayso shucuubta Itoobiya gaar ahaan shacabka somalida Ogadeniya Iyaga oo markasta ku shira xarunta Itoobiya ee Addis Ababa halkaas oo haba yaraatee ayna kajirin wax xoriyatul qawl ah.
Qaban qaabayaasha Banaanbaxa ayaa sheegay inay haystaan Fursad ay Codkooda ku gaadhsiin karaan Caalamka Iyo baarlamaanka Africa maadaama ay nasiib u heleen inay joogaan wadan xoriyatul Qawlku ka hirgalay.
African Union waxaa la aas aasay sanadkii 2004 iyada oo xiligaas dadka African ka ah galisay rajo weyn islamarkaana is tusay inay AU xaalada adag ee Africa is badal nabadeed u horseedi dadka rayidka ah ee Africa
Isha ku hay wararka dambe ee Baanaanbaxan Iyo wixii ka soo kordha.